Indlela izifiso ngosizo ngeso ibhodi iye yatha- yayo kudala, futhi impikiswano mayelana ukusebenza yayo yenziwa kuze kube manje.
Ungase ukholelwe ukuthi izifiso ikhadi (aka ngeso ibhodi) - i uzibuthe lisebenza ezokwenza ukuheha kuwe wayefisa ngokushesha ngangokunokwenzeka, futhi singabaze ngisho nokuthi amaphupho kungenziwa wagcwalisa kalula. ngeso ibalazwe esetshenziswa nabantu abanezinkolelo ezihlukile, futhi umphumela wawo kubonakala ngabanye. odokotela bengqondo Ucwaningo lwamuva uqinisekise ukuthi ngeso izifiso kusiza ukufeza amaphupho ngokushesha. Ngempela, lapho kudalwa ibhodi ufisa umuntu usebenzela yena ubeka izinto eziza kuqala ekuphileni futhi ubona imigomo yabo. Futhi lapho wazi kahle inhloso, kuba lula ukuhambisa kuye.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe usebenzisa zokusebenza kwengqondo Dreamboard ukuthola ukuthi unika umuntu unombono omuhle, olusekela endleleni eya umgomo.
Nokho, kusukela iphuzu elifanayo ezintweni eziphilayo umbono, ukubaluleka ngeso amabalazwe kuchaza umthetho jikelele: wacabanga futhi inkulumo impahla. Uma ucabanga, khuluma, ubona isithombe injabulo yakho esikhathini esizayo, khona-ke ngokushesha liyoba ngokoqobo yakho. Yingakho ngeso ufisa kahle.
Ngakho, ukwakha izifiso ibalazwe ngeso amabutho zendawo yonke ziwubufakazi ngohlangothi lwakho? Ngezansi uzothola izincomo kunesidingo.
Indlela ukukhetha isikhathi esifanele ukukhiqiza amamephu ngeso?
ufisa ibalazwe ngeso engcono phakathi ukuthi ukwedlulela kuleso sigaba ukuphila esigabeni esisha, emva update lesi simo. Shono abaningi ukuba ashintshe ukuphila kwakho in the Year New - akusiwona nje iholidi ikhalenda, kodwa futhi isikhathi esihle wonke akufeza. Kodwa kuthiwani uma ungafuni ukulinda kuze December 31, futhi uzimisele ukuthatha isinyathelo esiwujuqu ngokushesha?
Ukuhlelela izenzakalo ezinjalo ezibalulekile ngokusebenzisa ikhalenda kwenyanga - ikubonisa okuyinto izinsuku lwenyanga mahle for ukugcwaliseka izifiso, futhi yini - kuyinto bazisa okungekuhle.
Umsebenzi ekhadini kuhle ukuqala ngaleso ukwethwasa kwenyanga, noma ngosuku lokuqala amamephu wakho ngabanye lomjikelezo enqunywa ngokuthwasa kwenyanga.
Yini ofisa kusiza ukuba afeze imaging ibhodi? izifiso kwemephu imithetho ekuwulungiseleleni
ufisa imephu ukubona ngeso kuzokusiza afeze cishe noma isiphi isifiso. Into esemqoka - enelungelo ke. Uma lesi sifiso kufanele ucace, kucacile futhi ephephile yokuba wena nabanye. Musa wena engozini ukuba isikhundla lwasemaphusheni iqhawe, ngubani wabanjwa genie ezonakele. Ukwaneliswa kwezifiso zokusungula akusho kuyokulethela injabulo, futhi nje ukuthatha enkingeni, uma ungenawo basabela inqubo efanele.
Desire washayelwa ngoyebo sikhathi (akukho "uma", "wake"). Imibhalo Eqoshiwe ebhodini ngeso kufanele uchaze "kwephupho" ukuphila kwakho, ukuba "umyalezo ovela esizayo."
Okubona isifiso kufanele ibe izithombe zakho ezihamba phambili - lapho niyajabula, bejabule futhi ujabule, sizungezwe oyifunayo: ngokumelene okwenza kwenkundla emangalisayo, ebizayo. imoto noma sokunethezeka amakhaya.
Isifiso Awukwazi ukusebenzisa kuyizinhlayiyana "cha" (universe akunjalo "ukuzwa"). Futhi uma ufisa "ubekezele", ngeke ukukusiza ukuqeda lesi sifo, kodwa kunalokho babhebhethekisa inkinga. Kahle esinamazwi isifiso: "Ngizobaqeda enempilo, Kuyangijabulisa futhi anelisiwe ukuphila kwakho!"
Okubona ufisa - isinyathelo endleleni eya empumelelweni!
Dzhuletta Kapuletti - umlingiswa oyinhloko webhayisikobho nhlekelele uWilliam Shakespeare sika "Romeo and Juliet"
Speed Ububanzi: Isikimu
Point phezu izindebe elibomvu: izizathu kanye nokwelashwa
Hlobo luni plant Portulaca. Ezikhula imbewu lokhu
"Vatsapp" - kuyini, ukuthi imisebenzi, uhlelo lwayo lokusebenza
Yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali i-HIV. Indlela okwenziwa?